ကိုဗစ်ဖြစ်တာ ဆေးရုံက ဆေးကုသခွင့် မပေးသဖြင့် ခလေးသုံးဦး ကို ကူးစက် မှာ စိုးရိမ်ပြီး မိမိကိုယ် ကို ဆွဲကြိုး ချ – Shwe Thadin
သတ်သေခဲ့တဲ့ ထိုင်းရောက်မြန်မာတစ်ဦး ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေထိုင်အလုပ်လုပ်နေသော ကိုအောင်တင်ထွန်းအသက်(33)နှစ်ဟာ ခလေးသုံးဦး ဖခင်ဖြစ်ပြီး ယခုလက်ရှိ ကျန်ရစ်ခဲ့သော ဇနီးသည် မသဲဖြူခ မကရင်မ မှာလည်း ၆ လသား ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရ တယ် လို့ ကိုဗစ်ဖြစ်တာ ဆေးရုံက
ဆေးကုသခွင့် မပေးသဖြင့် ခလေးသုံးဦးကို ကူးစက်မှာစိုးရိမ်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ဆွဲကြိုးချမသဲဖြူက ပြောပါတယ်။
ကိုဗစ်ကူးစက်တာ ဆေးစစ်ချက်အဖြေအရ သူသိခဲ့ရပြီး ပထမဆေးရုံတစ်ခုကို သွားတယ် ကုသခွင့် မပေးဘူး ဒုတိယဆေးရုံတစ်ခုကို ထပ်သွားတယ်ကုသခွင့်မရပြန်ဘူး အိမ်ကိုပဲ ပြန်ခိုင်းတယ်။ သူနောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ် လိုက်တာက ဖခင်ကောင်း တစ်ဦးရဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်တာ ဆေးရုံက ဆေးကုသခွင့် မပေးသဖြင့် ခလေးသုံးဦးကို
ကူးစက်မှာစိုးရိမ်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ဆွဲကြိုးချဆုံးဖြတ်ချက်လို့ ပြောရမလား ဘဝကို အရှုံးပေးသွားတယ်ပဲ ပြောရမလား ဖခင်တာဝန်ကျေပွန်ခဲ့ပြီးတစ်ဦးထဲ မိသားစု ကို လုပ်ကျွေးနေခဲ့သော ကိုအောင်တင်ထွန်းဟာသူ့ရဲ့ လူမမယ်အရွယ် ခလေးသုံးဦးနဲ့ ကိုယ်ဝန် ဆောင်ထားရတဲ့ ဇနီးသည်ကို မကူးစက်စေဖို့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ပထုန်ဌာနီခရိုင်
ခေါင်လွှမ်းနယ်မြေ ခေါင်းစံ စွယ် ၁၁ ကသစ်ပင်တစ်ပင်မှာ သူဟာ မိမိကိုယ်မိမိ အဆုံးစီရင်သွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေ အတွက်သတိပေးခေါင်းလောင်းသံတွေ လာနေပြီခုလက်ရှိ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ဖခင်မဲ့ မိသားစုလေးကို ပထုန်ဌာနီခရိုင်ကပရဟိတမိတ်ဆွေများနှင့် ပူးပေါင်း၍ AAC အဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့မှုတွေ
ဆောင် ရွက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုင်းမှာ မြန်မာတွေ ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေတာ ဒီဖြစ်ရပ်ကကိုဗစ်ဖြစ်တာ ဆေးရုံက ဆေးကုသခွင့် မပေးသဖြင့် ခလေးသုံးဦးကို ကူးစက်မှာစိုးရိမ်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ဆွဲကြိုးချသက်သေပြခဲ့ပြီ…. ပုံ-6-7-2021 ရက်နေ့ ဘဝကို အရှုံးပေးသွားသော ဖခင်နှင့် ကျန်ရစ်သော
မိသားစုပုံရိပ်…. ရဲမင်း(AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့) ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားကူညီစောင့်ရှောက် ရေးကော်မတီ ….. စိတ်မကောင်းဘူး ကောင်းရာဘုံဘဝရောက်ပါစေ